Soosaarayaasha & Shirkadaha Wi-Fi ee SMB - Shiinaha SMB Wi-Fi Factory
EAC660 SMB Maamulaha Helitaanka Xannibaadda Smart
EAC660 waa xakamaysade helitaan caqliyeysan (AC) oo ay soo saartay Yunke China Information Technology Limited (hadda kadib loogu yeero DCN) ee shabakadaha wireless-ka ee SMB iyo laamaha shirkadaha waaweyn. Waxay ku biiri kartaa DCN smart EAP dhibcaha helitaanka fiilooyinka wireless (APs) si loo sameeyo xal dhexdhexaad ah oo loo maamulo wireless LAN (WLAN). EAC660 waxay taageertaa 4 * GbE Combo (SFP / RJ45), 12 * 1000M SFP port iyo 4 * 10GbE SFP + port for uplink. Waxay maamuli kartaa illaa 260 smart wireless AP. Qalabka wuxuu bixiyaa xoog WLAN acce ...
EAP380-L SMB Smart Gudaha 802.11ac Dual Band AP
EAP380-L waa shirkad cusub oo kharash-ku-ool ah Wi-Fi AP (Access Point) oo ay soo bandhigtay DCN. AP waxay taageertaa heerka 802.11ac iyo 802.11n labadaba iyadoo leh Ethernet iskuxirka kor u kaca. Nidaamka ugu sareeya ee la soo mariyo wuxuu noqon karaa ilaa 733Mbps. Raadiyaha 2.4GHz wuxuu taageeraa heerka 802.11n iyadoo la adeegsanayo illaa 300Mbps; raadiyaha 5GHz wuxuu taageeraa heerka 802.11ac iyadoo la adeegsanayo ilaa 433Mbps. EAP380-L waxay siisaa waxqabad badan oo raadiyaha, mobilada, amniga iyo injineernimada taraafikada iwm.